မည်သို့ဆင်းရဲသား Neapolitan အဘိဓါန်ကွက်လပ်ကယ်လိုရီ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ "ဘယ်လိုဆင်းရဲသား Neapolitan အဘိဓါန်ကွက်လပ်ကယ်လိုရီနိုင် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သငျသညျသကြားမပါဘဲတစ်ဦးအလင်းအချိုပွဲပြင်ဆင်ထားရန်လိုသလား? ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူသကြားမပါဘဲအနည်းငယ် Neapolitan အဘိဓါန် flan အောင်မြင်ရန်ခြေလှမ်းကစာရွက်ခြေလှမ်းမျှဝေပါ။ ဘယ်လိုကြိုးစားနေကော?
အဆိုပါ flan ခုခံတွန်းလှန်ရန်ခဲယဉ်းသောအချိုပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာအားလုံး, ငယ်ရွယ်ပြီးအဟောင်းကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ အကောင်းဆုံးသတင်း? ကျနော်တို့ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ် သငျသညျက၎င်း၏ကယ်လိုရီ content တွေကိုလျှော့ချဖို့သကြားမပါဘဲပွငျဆငျနိုငျပုံကို။ သင်ကဂန္ custard အဖွားအဖြစ်ကြောင့်အရသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အလင်း Neapolitan အဘိဓါန်အလွတ်စာရွက်
အဆိုပါ Neapolitan အဘိဓါန် custard ယင်း၏ sponginess အားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ ယင်း၏ပျော့ပျောင်းသော texture ခံတွင်းအချိုပွဲအတွက်အရည်ပျော်ပြီးပိုစားရန်ဖိတ်၏။ သူ၏ ပြင်ဆင်မှု သင်ထင်ထက်အများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံအနည်းငယ်အချိန်လေးတွင်, သငျသညျမိသားစုတစ်စုလုံးအံ့သြဖို့အရသာရှိတဲ့အချိုပွဲရပါလိမ့်မယ်သိမြင်ပါလိမ့်မယ်။
၎င်း၏အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများသည် ကွက်လပ်၏အခြေစိုက်စခန်းနို့နှင့်ကြက်ဥ၏ဖန်ဆင်းထားသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးပြင်ဆင်ထားရန်လိုခငျြသောကွောငျ့ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်နို့များအတွက်ရွေးချယ် ကယ်လိုရီအချိုပွဲ.
ပေမယ့်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် နို့ကယ်လစီယမ်နှင့်အိုင်အိုဒင်းကြွယ်ဝသည်နှင့်ကြောင့် Lactose ကို၏တူညီသောငွေပမာဏကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား skimmed နှင့်တပြင်လုံးကိုနို့အဖြစ်ကြားကအဆီဖယ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းဗီတာမင် A နှင့် D ကိုရှုံးသည်။ သင်သည်သင်၏ flan သည်ဤဗီတာမင်ဆံ့ချင်လျှင်, မြေတပြင်လုံးနို့ကိုသုံးပါ။
ကြက်ဥ, သို့သော်, မြင့်မားသောအာဟာရတန်ဖိုး အရည်အသွေးမြင့်ပရိုတိန်းနဲ့ monounsaturated fatty acids ၏မြင့်မားသောအကြောင်းအရာနှင့်အတူ။ သူတို့ကအစဗီတာမင် A, B (B2, 3, 12 နှင့်ဖောလိတ်), phosphorus ကို, အိုင်အိုဒင်းနဲ့ပေး ဆယ်လီနီယမ်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော့်အစားသကြားအစားနို့ဆီနှင့် stevia ၏ ricotta သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တစ်အချိုပွဲသင့်လျော်အောင် ဆီးချိုရောဂါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်၏သင်တန်း, သငျသညျသကြားအဘို့အ stevia အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
လွဲချော်ခံရဖို့မ: ဤအိမ်တော်နှင့်အတူတစ်အရသာချောကလက် mousse စာရွက်ပြင်ဆင်ပါ
2 ခွက်နှင့် 1 /2နို့ယူသွား
1 ခွက်ကို 1 /4ricotta
အမှုန့် stevia ၏ 1 ဇွန်း
2 ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ
အမှုန့် sucralose ၏ 50 ဂရမ်
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: သစ်တော်သီးနှင့်အတူကိတ်မုန့်: သင်၏အစားအစာများအတွက်ကျန်းမာအချိုပွဲ
အလင်း Neapolitan အဘိဓါန်ကွက်လပ်၏ပြင်ဆင်မှု
200 ºCမှ Preheat မီးဖို။
တစ်ဦး Blender အတွက်အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်နို့, ဒိန်ခဲနှင့် stevia ရောမွှေပါ။
သင်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောအရတဲ့အခါ, vanilla add ပြီးထပ်မံရိုက်တယ်။ စာအုပ်။
caramel ပြင်ဆင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အနိမ့်အပူကျော်ပြီနောက်ဟင်းထား sucralose ထည့်ပါ။ ဒါကြောင့်အရောင် (ဆံပင်ရွှေရောင်) ပြောင်းလဲသည်အထိမွှေပေးပါ။ အပူကိုပိတ်ထားပါနှင့်ရေနှင့်သံပုရာဖျော်ရည်ကို add, အဆက်မပြတ်နှိုးဆော်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ Aerosol အလွတ်အတူမှိုကိုလေပေါ်မှာပ။
အဆိုပါ caramel နှင့် Neapolitan အဘိဓါန်အလွတ်အရောအနှောကိုလောင်း။
လူမီနီယံသတ္တုပါးနှင့်အတူအဖုံးဖုံးပြီးရေရေချိုးပန်းကန်ကိုပွငျဆငျ။ 1 /3သင့်ရဲ့မှိုကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းကနေရာကိုရေနှင့်ဒယ်အိုးချထားပါ။
တစ်နာရီခန့် 180 ºCဘို့အကွတ်။ ရေကိုလုံးဝရေငွေ့ပျံမဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, ပိုပြီးရေထည့်ပါ။
ကွက်လပ်များနှင့်ဓါးသန့်ရှင်းတဲ့အထဲကလာလျှင်ဖောက်ရာ, ကသူအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ အလွယ်တကူ unmold မှ Cool ။
သင်သည်တတ်နိုင် အသုံးပြုမှု ဗာဒံနို့ အစားအကြမ်းဖျဉ်းဖတ်နို့။ အဆိုပါအချိုးအစားတူရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စတော်ဘယ်ရီ, ချယ်ရီသီး, သီး ... သင်လိုချင်တာအားလုံး: အသီးအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်သင်၏ flan အလှဆင်!
သငျသညျ dulce က de Lech ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သင့် flan အပေါ်တစ်ဦးဇွန်းထားရန်ကြိုးစား!
သင်သည်တတ်နိုင် နို့ဆီနှင့်အတူ ricotta အစားထိုးရန်သင်တို့မူကား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြား၎င်း၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ၏ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ Neapolitan အဘိဓါန် flan စာရွက်၏အဘယျထင်ပါသလဲ ဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အခမဲ့ခံစားရကျနော်တို့ကရိုးရိုးအရသာသောကြောင့်ထိုသို့ငယ်ရွယ်ပြီးအဟောင်းကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်သေချာနေပါပြီ!
အုန်းသီး Custard unsweetened နှင့်နို့မပါဘဲ
သကြားသို့မဟုတ်နို့မပါဘဲအုန်းသီး flan တစ်အရသာနှင့်ကျန်းမာအချိုပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပွငျဆငျပွီးပျော်မွေ့ရန်ဤဆောင်းပါး၌လေ့လာပါ! Read more »
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများကစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏ဥပမာများအကြောင်းဟုနေကြသည်ဘာတွေသိထား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ